Kaftanka Siyaasadda Beelaysan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kaftanka Siyaasadda Beelaysan
Waxaa sheeko dhex mareyso qaar ka mid ah, bulshada iyo dareenkii ay ka qaateen, hadalkii golaha guurtida Muqdisho.
Afku xoogle: Xirsiyoow saw maad maqal wixii odayadiinu sheegeen, in Xamar reer leeyahay oo dadka kale Marti ku yahay.
Xirsi Yureeye: kkkk, War heedheh niyaw waxaan moodayey inaad is beddeshaye weli ma halkii baad taagantahay?
Afku Xoogle: Inaadeeroow ma Caasimaddii Qaranka ayaad leedahay reer baa leh?
Xirsi Yureeye: Warkaagii oo duuban baan hayaa adigoo leh, haddaad naf leedahay magaaladaada nabad ka dhigo oo maatidaada badbaadi, iina ogol inaan anigu leeyahay, Mugaan ku dhahay, maadan walaalkay ahayna waxaad dhahdey, aniga Tuulladayda waa haggaajistee, meesha haggaaji adigaa lehe, haddee Odaygayga sidaasuu ogyahay adna waa ogtahee maxaa is beddelay?
Afku xoogle: Waayahee Caasimadda ka wareejiya oo meel kale geeya?
Xirsi Yureeya: Caasimadda ma taliye guute ayaad u malaysaa mise Agaasime waaxeed, xay tahay wareeji, haddaad xamar guryaha dowladda ugu yaal wiish ku qaaddeyso kaalay wareeji, haddii kalena iska sug inta la dhisaayo Magaalo caasimad ah oo aan la kala lahayn, intaas dowladda Dal kale maw u guureysaa sow meel ay deganaato ma rabto.
Afku xoogle: Ma xaqbaa inaan magaaladaan ku dhashay marti ku noqdo anigoo Soomaaliya?
Xirsi Yureeye: Ma beenbaan isu sheegnaa mise run? Adiga Gobolkaaga waa kaas laabta kuugu dhegan, wallee Garan Calan beeleed ku sawiran yahay ma sidatid, Anigana waa kaas kii Gobolka Banaadir iigu dhegsan, kaaga fuji kayga waa fujihaa, Marti kama tihid, ee waa ku dhaqmi karta waana ku dhaqsoolin kartaa, Maamulka gobolka iyo maaliyadiisase martiyaad ka tahay.
Afku xoogle: Caasimadda Soomaaliya reer baa leh layska yeeli maayo, niyaw ileeyn Qabyaalladiiste weyn baad ahayd iyo dadka dalku ka degi waayey.
Xirsi Yureeye: Maya qabyaaladiiste ma ahayn ee Qiiro jabaantii Soomaaliya Soomaaliya leh aad igu sirtay waa iska dhaafay, hadda Xaafad walba xerteedaa leh, hees la dhaho ayaa dhegaystaa.
Afku xoogle: Odayaashu raaligelin waa inay ka bixiyaan hadalkaas, haddii kale Soomaalinimada waa lagu kala guurayaa!
Xirsi Yureeya: Aryaa maygu dheele mise dhabay kaa tahay, Odayaasha unuku hadda Visus Abaalmarin ah iyo mahadcelinaan u dirnay inay Xajka laba jeer tagaan, adna raali gelin ayaad sheegaysaa.
Afku xoogle: Waayahee haddeynaan Caasimadda wada lahayn maxaan wada leenahay?
Xirsi Yureeye: Warkaagu hadduu raayaa, Dowladdaan wada leenahay, Calankaan wada leenahay, Magaca Soomaaliyaan wada leenahay iyo wixii kale oo aan isku af garano, Su’ aal maku warsan karaa Afku xoogloow?
Afku Xoogle: Haaye soo daa.
Xirsi Yureeye: Horta Maka ma taqaana?
Afku xoogle : Haa sawtii Sacuudiga maaha?
Xirsi Yureeya: Haa ee Xajka ilaahay ku yaalay Muslimiinta oodhana wada lahaayeen.
Afku Xoogle: Nacam waaba meesha inaan difaacno waajibka nagu ah, Muslinka qibladiisa iyo meesha laga xukumo.
Xirsi Yureeye: Adigoon Fiise waddan ma tegi kartaa?
Afku Xoogle : Maya mararka qaarkood ayaadan Fiisaheeda heleeninba.
Xirsi Yureeye: Alloore Qiblada halaga wareejiyo iyo Xajka maadaama Sucuudiga keliya Fiise la’aan ku tegi karaan, oo Muslimiinta kale Marti ka yihiin.
Afku Xoogle: Hayaay oo ma dhankaas ayaad ka waday?
Xirsi Yureeye: Dhankaad wax ka fahmaysid waaye.
Afku Xoogle: Caasimadda waa wada leenahay Xildhibaanada ayaana go’aan ka gaadhaya.
Xirsi Yureeye: Afku xoogloow, Caasimadda markii Mareykan, Amxaar, Carab iyo Alshabaab, bellaayo iyo Baas xabbada ku harqineysay ma joogtay adiga iyo beeshaada iyo beelaha kale?
Afku xoogle: Nacam waa joogney markii dhiigi durdurayey.
Xirsi Yureeye: Weligaa ma aragtay ciidan gurmad ah, ama Odayaal dhaqaale wada iyo daawo uu u socda oo gobollada kale ka yimid, reerka sheeganaya maahine?
Afku Xoogle: Een eeen een dalkoo dhan ayaa dagaalku ka socdey marka laysuma gurman kareyne, iminka miyaadan xitaa inta .5 oo kale xitaa nooga ogoleyn.
Xirsi Yureeye: Ninkii Aamusa ee aan ilaaq wadin, Damac iyo waali keenin waa u ogolahay wax bartood, anigaaba isku badane.
Afku Xoogle: Xirsiyoow niyaw goormaad Qabyaallada baratay sawdigii Soomaalida jeclaa?
Xirsi Yureeye: Muggaad ka soo rayn weyday aan kaa daray eeboow.
ismari waaga labada ciyaartooy ee beelaha u kala safan keebaa gar leh keebaase gardaran?
W.Q . Cabdiraxiim H. Galayr